चियाबारे यस्ता जानकारी तपाईंलाई सायद थाहा नहोला – Rapti Khabar
चियाबारे यस्ता जानकारी तपाईंलाई सायद थाहा नहोला
धेरैको घरमा एकै तरिकाले चिया बनाइन्छ । पानी, दुध, चीनी, चियापत्ती हालेर उमालिन्छ । केही मसला हाल्नुछ भने उम्लिएको केही समयपछि हालिन्छ र एकछिन पुनः उमालिन्छ । तर यो विधीलाई गलत मानिन्छ । त्यसो भए चिया बनाउने सही तरिका के हो । दिनमा कति कप चिया पिउने वा खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ।
चिया बनाउने सही तरिकाः
एउटा भाँडोमा पानी लिनुहोस् । त्यसलाई उमाल्नुहोस् । पानीलाई आधा मिनेटभन्दा बढी नउमाल्नुहोस् । त्यसपछि एउटा सुख्खा भाँडामा चियापत्ती हाल्नुहोस् र त्यसमाथि तातो पानी खन्याउनुहोस् । ५–६ मिनेटका लागि भाँडो छोप्नुहोस् । त्यसपछि एउटा कपमा छानेर हाल्नुहोस् । अब स्वाद अनुसार दुध र चीनी हाल्नुहोस् ।
एक कप चिया बनाउनका लागि आधा चम्चा चियापत्ती ठिक्क हुन्छ । चियापत्ती, दुध र चीनीलाई सँगै हालेर उमाल्नु चिया बनाउने सही तरिका होइन । यसो गर्दा चियाको सबै फाइदा नष्ट हुन्छ । यसरी चिया बनाउँदा चीया वा कफी स्ट्रङ्ग हुन्छ र यो थप कडा हुन्छ । त्यसकारण यस्तो चिया पिउनुको कुनै फाइदा छैन ।
कहिले पिउने चिया ?
हुन त चिया जहिले पनि पिउन सक्नुहुन्छ तर बेड टी अर्थात्, उठ्ने बित्तिकै चिया पिउनबाट बच्नुहोस् । वास्तवमा, राती सुत्दा र आराम गर्दा आन्द्रा फ्रेश हुन्छ त्यसकारण बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पिउनु सही हुँदैन । अबेर राती चिया पिउँदा निन्द्रा नलाग्ने समस्या पनि हुनसक्छ ।
चियासँग के खाने ?
जसलाई एसिडिटीको समस्या छ उनीहरुले कहिले पनि चियामात्रै खानुहुँदैन । उनीहरुले चियासँग थोरै बिस्कुट वा पाउरोटी खानुपर्छ । यस्तै, ग्रीन टी हर्बल ड्रिंक हो त्यसकारण यसलाई खाली पेट खाँदा राम्रो हुन्छ । योसँग केही नखाँदा यो लाभकारी हुन्छ ।
एक दिनमा कति चिया पिउने ?
मानिसहरु दिनमा ५–१० कपसम्म चिया पिउने गर्छन् तर जे कुरा पनि अत्यधिक भयो भने यसले फाइदाको साटो हानी गर्ने गर्छ । दुध वा चीनीबिनाको हर्बल चिया हो भने जतिपटक पनि पिउँदा भयो तर दुध चिया दिनमा ३ कपभन्दा बढी पिउनु हुँदैन ।
तात्तातो चिया पिउनु कति सही ?
चिसो वा पानी पर्दा मानिसहरु तात्तातो चियाको माग गर्छन् । कहिलेकाँही तात्तातो चिया पिउँदा मुखसमेत पोल्छ जबकी चियालाई कपमा राखेको २–३ मिनेटपछि मात्र पिउनुपर्छ ।
कोरोना लाग्दा ज्वरो-खोकी कस्तो हुन्छ, लक्षण रुघाखोकीको हो वा कोरोनाको, कसरी थाहा पाउने?
Posted on September 4, 2020 Author Rapti Khabar
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बिहान-बेलुकी चिसो बढ्न थालेको छ। याम परिवर्तनसँगै मानिसहरूमा मौसमी ‘फ्लु’ देखा पर्न सक्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, टाउको दुख्नु, थकान महशुस हुनु लगायत मौसमी फ्लु (रुघामर्की) का लक्षण हुन्। मुख्य कुरा के भने, अहिले सिंगो देश नै लडिरहेको कोरोना भाइरसको लक्षण पनि फ्लुका लक्षणसँग मिल्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ज्वरो, खोकी […]
यस्ता छन् महादेव अर्थात भगवान शिवका भित्री रहस्य
हिन्दु धर्ममा महादेव अर्थात भगवान शिवको विशेष महत्व छ । आज हामी तपाईंलाई महादेवका केही रहस्यको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ । १.आदिनाथ शिव : सबैभन्दा पहिला भगवान शिवले नै धर्तीमा जीवनको प्रचार प्रसारको प्रयास गरेका थिए । त्यसैले उनलाई आदिदेव भन्ने गरिन्छ । आदिको अर्थ प्रारम्भ हुने गर्दछ । त्यसैले उनको एक नाम आदिश पनि छ […]
Posted on September 19, 2020 Author Rapti Khabar
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । मंगल कार्यको योगछ र सन्तान सुखपनि मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा बाटो काट्दा वा यात्रा […]
आज २०७७ भदौ ६ गते शनिबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज वर्षाको सम्भावना कस्तो छ ? थाहा पाउनुस